yekutanga OS 6 inozivisa yayo yekutanga nhau | Linux Vakapindwa muropa
Kufanana nemapurojekiti mazhinji, iyo inotungamirwa naDaniel Foré inoburitsa chinyorwa chepamwedzi nezve zvese budiriro dzavari kuita uye zvirongwa zvavanazvo nezveramangwana ravo. Mune ino kesi, inowanzo kuve Cassidy James Blaede, uyo maawa mashoma apfuura ataura nesu yezvinyorwa zvitsva zvichauya yekutanga OS 6. Asi sezvo vhezheni yechitanhatu ye "primary operating system" isati yarongwa, takaudzwawo nezve shanduko dzinozounzwa muHera.
Cassidy anoyeuka kuti yekutanga OS ikozvino inoshandisa semi-rolling kuburitsa modhi yekuvandudza, uye izvo zvinobvumidza vashandisi vayo kunakidzwa nenhau zvakatonyanya kupfuura pakutanga. Asi iyo "semi" zvinoreva kuti haisi yekusingaperi uye kuti mune yepakati temu ramangwana vanozoparura yekutanga OS 6 iyo inogona kutotestwa kubva kune yayo Yekutanga Access Inovaka, inotakurika kubva Iyi link. Tevere isu tichataura nezve iyo nhau dzichasvika kuhurongwa Mumavhiki anotevera.
1 Munguva pfupi mune yekutanga OS 5.1 Hera
2 Kutanga nhau muchimiro chekuchinja kune yekutanga OS 6
Munguva pfupi mune yekutanga OS 5.1 Hera
Kuchengetedzeka uye kugadzikana kugadzirisa.
Mune marongero ekhibhodi, ivo vakawedzera maonero matsva kunzira dzekuisa, izvo zvinoita kuti zvinhu zvive nyore kunyanya mumitauro seAsia
Iyo chiratidzo chemumhanzi pane yepamusoro pani yakagadziridzwa, izvo zvinove nechokwadi chekuti default player inoratidzwa kana pasina chinhu chiri kutamba.
Minor yekuvandudza muAppCenter kuve nechokwadi chako windows chinzvimbo chakachengetwa uye chadzoreredzwa nemazvo.
Yakagadziriswa boothole kushomeka.
Kutanga nhau muchimiro chekuchinja kune yekutanga OS 6
Iyo interface yakadzoswazve, kutanga nechairi typeface uye dhizaini jira. Izvi zvinokanganisa hurongwa hwese.
Rima dhizaini yezvinhu zvehurongwa senge iyo Dock, zviratidzo zvepaneru, kufukidza nzira pfupi yekhibhodi, dialogs dzesisitimu, nezvimwe.
Default yepuruvara yakasarudzwa nemushandisi mune ese maapplication. Zvirongwa zvinogona kuramba zvichidarika izvi kana vachida, asi iyo yakasarudzika Blueberry ruvara pamusoro inogona kuchinjirwa kune akasiyana mapareti mavara anosanganisira Strawberry, Orange, Banana, Lime, Mint, Grape, uye Bubble Gum.
Kukosha kwakakosha mukutaurirana uye musangano maapplication, senge Evolution.
New basa rechikoro.
Iyo nyowani yekumisikidza uye yekutanga dhizaini yekuvandudza yekutanga-yekutanga chiitiko.
Yakagadziridzwa mizhinji-yekubata rutsigiro yekufamba pakati pezvibodzwa uye mamwe mabasa.
Panguva ino, vashandisi vanofarira kuyedza yekutanga OS vanogona kurodha pasi Hera 5.1.6 kubva kune yavo website yepamutemo. yekutanga OS 6 haina zuva rakarongwa rekuburitsa parizvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iwo matsva ekutanga ayo anosvika neyekutanga OS 6 anoratidzwa, senge nyowani typography uye kugadzirisa mune yakasviba modhi
Iko kune skrini yezvinoita zvinoita?
Mhoro Ivan. Kwete. Iwe une chinongedzo kuchinyorwa chekutanga uye ivo vanongotaura nezve idzi nhau, asi vasina screenshots. Ivo vanoti icho chingori chipembere uye kuti pachave nezvimwe zvinhu, asi vakagara ipapo.
Inenge 20 GB yeIntel yemukati mahunyanzvi zvinyorwa uye sosi kodhi yakaburitswa